My freedom: My Magic Jacket
တနင်္ဂနွေနေ့ ရောက်လာပြန်ပြီ။ မနေ့က Shopping ထွက်တယ်။ ကိုယ့်အတွက်တော့ မဟုတ်ဘူး။ နောက်အပတ်စနေနေ့ကျရင် ယောင်းမက ခဏပြန်မယ်ဆိုတော့ အမေတို့အတွက် လက်ဆောင်ထည့်ပေးလိုက်ချင်လို့ သွားဝယ်တာ။ 313 Somerset ပဲ သွားလိုက်တယ်... သွားသာသွားရတယ်၊ လူက ဘာဝယ်ပေးရမလဲ မသိသေးဘူး။ နောက်ဆုံး... အဖေ့အတွက် အတွင်းခံစွပ်ကျယ်။ အဖေကစွပ်ကျယ်ကို လက်ပါတဲ့ဟာပဲ ၀တ်တတ်တယ်လေ။ တစ်ခါရန်ကုန်မှာ သူအဲ့လိုစွပ်ကျယ်မျိုးရဖို့ မနည်းရှာလိုက်ရတာ တွေ့ဖူးတယ်။
အမေနဲ့ညီမလေးအတွက်က Victoria Secret က Body Wash, Fragrance Mist နဲ့ Body Lotion... မောင်ဝမ်းကွဲလေးအတွက်ကတော့ ရှပ်အကျီ။ အစက အမေ့အတွက် လက်ကိုင်အိတ်ဝယ်ပေးရင်ကောင်းမလား စဉ်းစားသေးတယ်။ သယ်သွားပေးမယ့်လူ မျက်နှာလည်း ကြည့်ရသေးတယ်ဆိုတော့ ဒီလောက်ပဲကောင်းပါတယ် ဟီးး xD
ဟင်းမချက်နိုင်ဘူး။ အပြင်စာချည်းစားနေရတာ ညည်းငွေ့လာပြီ။ မနေ့ကတော့ ငါးကင်သွားစားတယ် (ဓာတ်ပုံမပါ)။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ ညကျတော့ အမေက ရန်ကုန်အိမ်မှာငါးကင်လုပ်စားတယ်တဲ့ *ရှလွတ်*။ သူများပေးတဲ့ ဒီမုန့်ကို မစားရက်လို့ လောလောဆယ် အလှကြည့်ထားတယ် ဟဟ :D
Yayyy... ကန်ဒီ White Coat စ၀တ်လို့ရပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကစပြီး ကန်ဒီ့ကို စ,၀တ်ခိုင်းတယ်။ သူတို့က "Magic Jacket" လို့ခေါ်တယ်။ Confidence ပိုရှိစေလို့တဲ့။ Training ကတော့ မပြီးသေးဘူး။ ကန်ဒီ့ကို Capturing ပိုင်း စ,သင်တုန်းရှိသေးတယ်။ Capture လုပ်တယ်ဆိုတာ ဆရာဝန်ကပို့လိုက်တဲ့ ဆေးအော်ဒါကို ကန်ဒီတို့ Pharmacy ကနေ Dose သင့်တော်လား၊ ဆေးရှိလား အဲ့လိုမျိုးတွေစစ်ဆေး၊ Confirm လုပ်ပြီး Price Label, Drug Label ထုတ်ပေးတာကို ပြောတာ။ အဲ့လို Capture လုပ်ပြီးမှ ဆေးတွေ စ, Pack လုပ်တယ်။ Pack ပြီးရင် Dispense လုပ်တယ်ပေါ့။ Packing နဲ့ Dispensing ပိုင်းတွေကတော့ ကန်ဒီ့ကို Train ပြီးသွားပြီ။ တစ်ယောက်တည်းတော့ Dispense မလုပ်ရသေးဘူး။ Pharmacist က ကန်ဒီ Dispense လုပ်တာ ကြည့်ပေးပြီး လိုအပ်တာတွေ ပြောပြတယ်။
Dispensing (သို့) ဆေးပေးတဲ့အပိုင်းက ကန်ဒီတို့ Pharmacy ရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ဆိုတော့ အမှားတစ်ခုခုပါခဲ့လို့ အဲ့အဆင့်မှာမတွေ့ခဲ့ရင် လူနာဒုက္ခရောက်ပြီလေ။ အမှန်က ခုနကန်ဒီပြောတဲ့ Capturing အဆင့်ကတည်းက အမှားကတွေ့ရမှာ... Capture လုပ်တဲ့လူက မတွေ့ခဲ့ရင် Dispense လုပ်တဲ့လူတွေ့မှ... မဟုတ်ရင် မရတော့ဘူး။ ဆေးက Patient လက်ထဲရောက်သွားပြီ။ ကန်ဒီ ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာတင် အမှားသုံးခုလောက်တွေ့တယ်။ အသက်(၅)နှစ် (၁၆)ကီလိုပဲရှိတဲ့ကလေးလေးကို ဆရာဝန်ပေးထားတဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး Dose က လိုတာထက်ပိုများနေတယ်။ ကလေးအဖေကို အရင်ခေါ်၊ "ဆရာဝန်ကိုပြန်မေးစရာလေးရှိလို့ပါ..." ပြောပြီး စောင့်ခိုင်းထားရတယ်။ ပြီးတော့ဆရာဝန်ကို ဖုန်းခေါ်၊ Dose များနေကြောင်းပြောတော့ ဆရာဝန်က ပြန်ပြင်ပေးလိုက်တယ်။ ကလေးအဖေကစောင့်ရလို့ စိတ်မရှည်တော့ဘူး။ သူ့ဘက်ကကြည့်လည်း မှန်တာပဲလေ။ သူ့ကိုတော့ ဆရာဝန်ပေးတဲ့ဆေး Dose များနေလို့ ပြန်ပြင်နေရတာတွေ ဘာတွေပြောမနေတော့ဘူး။ တချို့စကားတွေကျတော့ ကိုယ်ပြောလည်းအကျိုးမရှိတာမျိုးဆို မပြောတာပဲကောင်းတယ်လေ။
ကန်ဒီတို့တော်တော်များများက တစ်ခုခုဆို ကိုယ့်အပြစ်ကလွတ်အောင် အဖြစ်မှန်ကို ရှင်းပြ၊ ပြောပြတတ်ကြတာများတယ်။ ကန်ဒီကိုယ်တိုင်လည်း တစ်ခါတစ်လေ ပါးစပ်က တ၀က်ဟပြီး ပြောဖို့ဟန်ပြန်နေပြီ။ အဲ့အချိန်မှာ ရုတ်တရက်ခေါင်းထဲပြန်တွေးလိုက်လို့ သူများအပေါ်မုန်းတာပဲ အဖတ်တင်မယ့်ကိစ္စမျိုးဆို ဟထားတဲ့ပါးစပ်ကို ပြန်ပိတ်လိုက်မိတာများတယ် (တခါတလေတော့လည်း :P)။
နောက်အမှားတစ်ခုက ညဘက်သောက်ရမယ့် Cholesterol ဆေးကို ဆရာဝန်က မနက်သောက်ခိုင်းထားတယ်။ Cholesterol ဆေး အများစုက ညဘက်ပဲသောက်ရတယ် (မနက်သောက်လို့ရတဲ့ ဆေးတချို့လည်းရှိပါတယ်)။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကန်ဒီတို့ခန္ဓာကိုယ်က Cholesterol ကို ညအိပ်နေတဲ့အချိန်မှ ထုတ်တတ်တယ်လေ။ အဲ့တော့မနက်သွားသောက်ရင် အကျိုးမရှိဘူးပေါ့။ အဲ့ကိစ္စလည်း ဆရာဝန်ကိုဖုန်းခေါ်ရတယ်။ ဆရာဝန်က ညဘက်ပြန်ပြင်ပေးလိုက်တယ်။ အဲ့လို အမှားတစ်ခါတွေ့တိုင်း လူကရင်တုန်တယ်။ ဟုတ်တယ်လေ... ဒီတစ်ခေါက်တွေ့သွားပေမယ့် နောက်တစ်ခေါက်မတွေ့ခဲ့ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?? အဲ့ဒါကြောင့် အလုပ်မှာ အရမ်းဂရုစိုက်ဖို့ လိုတယ်ပြောတာ =.='
တစ်ပတ်တစ်ပတ် အလုပ်အကြောင်းချည်းပြောနေလို့ ဖတ်တဲ့လူတွေ စိတ်ညစ်နေမလားတော့ မသိဘူး။ လတ်တလော ခေါင်းထဲရှိတာလည်း ဒါတွေပဲဆိုတော့ ဒါတွေပဲ ရေးစရာရှိတယ် (>.<)။ မနက်ဖြန် Chicken pox vaccine သွားထိုးရမယ်။ အလုပ်က အလကားထိုးပေးတာ။ မထိုးချင်ဘူး... ကြောက်တယ် (>.<)။ နောက်အပတ် (သို့) ခရစ်စမတ်မရောက်ခင်အပတ်လောက်ကို Orchard သွားဖို့ဟန်ပြင်နေတယ်။ မီးထွန်းထားတာလေးတွေ သွားကြည့်ချင်လို့...
Okie... ကန်ဒီနေ့လည်စာစားဖို့ သွားပြင်လိုက်ဦးမယ်။ ခေါက်ဆွဲပြုတ်ပဲဖြစ်မလား မသိဘူး ဟဟ။ ဟင်းမှမချက်ချင်တာ =.='
HaveaNice Sunday^^
Posted by Candy at 12:23 PM
ဆရာဝန့် လက်ရေးဖတ်ဖုို့ ဘာတွေသင်ပေးထားသေးလဲ။း)
ကန်ဒီ့စာတွေအမြဲလာဖတ်ဖြစ်ပေမဲ့ ခြေရာတော့ မချန်ဖြစ်ဘူး။ ခုတော့ CBox spam မှာ msgတွေများတယ်ဆိုလို့ link ချန်သွားတယ်နော်။း)
Thank you soooo much!!!! :D
အလုပ်အကြောင်းတွေ ဖတ်ရတာ မငြီးငွေ့ပါဘူး များများသာရေးနော်ညီမလေး...
ကန်ဒီရေ အလည်လာသွားတယ်နော် ကန်ဒီက ဘယ်အချိန်ဘဲကြည့်ကြည့်ချစ်ဖို့ ကောင်းနေတာဘဲ။